Ny Bokin’I Genesisy, araka ny filaharany dia boky voalohany ao amin’ny Baiboly. Mitantara ny fiandohan’ny zavatra rehetra izy, izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy, ny zava-boahary, ny zava-maniry, ny biby samy hafa karazana rehetra, indrindra ny olombelona. Hita ao ihany koa anefa ny fiandohan’ny fahotàna teo amin’ny zanak’olombelona, sy ny vokatr’izany fahotàna ziany, izay niafara tamin’ny safo-drano. Tao anatin’izany rehetra izany anefa no nahatsiarovana ny fitiavan’Andriamanitrta ka mbola nanaovany fanekena, tamin’I Noa, ary taty aoriana, ny Fanekena tamin’I Abrahama, izay tonga rain’ny firenena jiosy, dia ny zanak’Isiraely, ary avy amin’ny taranany no niforonan’ny fokom-pirenena sy ny firenen’Isiraely mihitsy. Ireo loham-pirenena ireo izay tsy hafa fa taranak’I Abrahama, no atao hoe Patriarka, na razam-ben’Isiraely.
Ny Genesisy 1: 26-31 dia manambara ny nahariana izao tontolo izao sy ny olombelona; araka ny foto-kevitry ny mpanoratra azy. Ezahintsika hojerena isaky ny andininy izany.
And 26: “Ary Andriamanitra nanao hoe: Andeha isika hamorona olona tahaka antsika, araka ny terehintsika, ary aoka izy hanjaka amin’ny hazandrano ao ranomasina sy ny voro-manidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin’ny tany”.